Pragha Music Player: Ciyaaryahan deg deg ah oo lagu sameeyay GTk | Laga soo bilaabo Linux
Luigys toro | | Aplicaciones, GNU / Linux
Haddii ay jiraan wax superfluous adduunka ee software free waa ciyaartoy multimedia, markan waxaan soo bandhigi a Ciyaaryahan lagu sameeyay GTk loo yaqaan Ciyaaryahan Pragha taasi waxay leedahay interface dareen leh waxaana lagu gartaa isticmaalka hooseeya ee kheyraadka.
1 Waa maxay Pragha Music Player?
2 Sidee loo rakibaa Pragha Music Player?
Waa maxay Pragha Music Player?
Waa a horumarsan oo fudud miyuusigga muusikada furan, oo lagu soo saaray iyadoo la adeegsanayo luqadda C, sqlite iyo GTk, oo leh astaamo kuu oggolaanaya inaad ku raaxeysato ciyaaryahan aad u dhameystiran adigoon wax badan ka cunin kombiyuutarkaaga.
Ciyaaryahanku wuxuu si fiican ula midoobayaa agagaaraha desktop Gnome iyo Xfce, oo bixisa maareynta maktabadda oo ku saleysan tags iyo qaabdhismeedka galka, sidoo kale waxay leedahay miirad wax ku ool ah oo heesaha ah waxayna u oggolaaneysaa abuurista liisas badan.
Ciyaartoygan lagu sameeyay GTk wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku ciyaarto oo aad ku saxdo feylasha maqalka ee mp3, m4a, ogg, flac, asf, wma, iyo qaababka daanyeerada, marka lagu daro akhrinta liistada liiska M3U, PLS, XSPF iyo WAX.
Ciyaaryahanku wuxuu leeyahay ogeysiisyo kombuyuutar oo u dhashay, maaraynta xariiqda amarka sidoo kale wuxuu kordhin karaa astaamahiisa iyada oo ay ugu wacan tahay plugins. Sidoo kale, waxay ku qalabeysan tahay isdhexgal macquul ah oo dareen leh oo dheecaan leh, taas oo ka dhigeysa mid ku habboon ciyaartoy nooc kasta oo kombuyuutar ah.
Ciyaaryahankani wuxuu leeyahay taariikh dheer oo horumarineed iyo soo deyn, hadda wuxuu ku jiraa nooca 1.3.9 wuxuuna asal ahaan ka soo jeedaa Ciyaaryahan Shibbane. Tan iyo markii la aasaasay illaa iyo hadda, waxay ilaalisay khad horumarineed oo loogu talagalay in lagu bixiyo astaamo aasaasi ah iyada oo aan la cunin ilo badan.
Sidee loo rakibaa Pragha Music Player?
Kahor rakibida Pragha Music Player waa inaan hubinnaa inaan haysanno ku-tiirsanaanta soo socota:
Kadibna waa inaan kala soo baxnaa nooca ugu dambeeya ee laga heli karo sii deynta bogga, hadda waa nooca 1.3.90 ka dibna waxaan raaci karnaa tallaabooyinka Cashar barasho: Ku rakib xirmooyinka .tar.gz iyo .tar.bz2 taas ayaa naga caawin doonta inta hawsha rakibidu socoto.
Markii la rakibo waxaan bilaabi karnaa inaan ku raaxeysto Ciyaaryahankan aadka u fiican ee lagu sameeyay GTk kaasoo na siiya sifooyinka lagama maarmaanka u ah inaan ku raaxeysano warbaahinteenna badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Pragha Music Player: Ciyaaryahan deg deg ah oo lagu sameeyay GTk
ma laha album album loo maqli karo, kaliya kuwan raadkaygay: c
Maxay ciyaartoyda badankood u haysan xulashadaas? Waxaan raadinayay bedelkii guayadeque (oo wax walba ay umuuqdaan inay tilmaamayaan inay horeyba u dhinteen) laakiin taasi indhaha ayey uga farxad badan tahay hilibka lo'da mana cuno ilo badan (marka laga reebo bloat) sida Clementine .. laakiin albumyada aan kala sooca lahayn ayaa ah dabeecada aan la waayi karin . wax ma taqaanaa?
Ku jawaab ronincreativos
Voyager 16.04.3: Waa nal qurxoon oo qurux badan kuna saleysan Xubuntu